FDL : Noderain’ny Praiminisitra manokana ireo Ben’ny tanàna sivy ao Mahajanga faharoa
Nitafa tamin’ireo ben’ny tanàna ao Mahajanga faharoa ny praiministra Christian Ntsay, ny sabotsy tolakandro teo. 1er octobre 2018
Ben’ny tanàna miisa sivy ao amin’ny distrikan’i Mahajanga faharoa no nasaina tamin’izany tao amin’ ny Hôtel baobab très. Niaraka tamin’ ny tale jeneralin’ny FDL sy ny minisitry ny atitany izy namantatra ireo fotodrafitrasa vita tamin’ ny famatsiam-bola azo...
Kaominina miisa 998 eto Madagasikara no nahazo io famatsiam-bola io, ka samy nahazo daholo ireo kaominina sivy ao Mahajanga faharoa. Avy amin’ny tetikasa PDCID (programme de développement communal inclusif et de décentralisation) sy ny PAPSP (projet d’appui à la performance du secteur public) ireo famatsiam-bola ireo. Ny PAPSP dia vatsian’ny Banky iraisam-pirenena 50 tapitrisa dolara. Ny PREA no mametraka azy ka ny FDL no mampihatra azy.
Misy masontsivana ny fahazoana FDL dia ny fananana tetibola fototra, ny fananana kaontim-pitantanambola tamin’ny taona lasa ka nahazo ny fanamarinana ny maha ara-dalàna na contrôle de légalité, ny fananan’ny kaomininampitambola ary ny fahatsaran’ny mariky ny fandorosoana na "indice de développement". Tetikasa ilain’ny vahoaka, manaja sy mijery tontolo iainana sy sosialy. Atrikasa fampiofanana sy tantsoroka no omena ireo kaomina sy ben’ny tanàna. Tetikasa 14 no nahazo famatsiam-bola mitentina 148 624 000Ariary tahaka ny ny Fananganana sekoly, bazar, vovo sy fampitaovana. Eo amin’ny 15 tapitrisa Ariary eo no azon’ny kaominina tsirairay... Efa 92% ny asa rehetra no vita ankehitriny.
Noderain’ny praiministra ireo kaominina satria nahavita zavatra. Misy aza nahavita tetezana izy ireo. “Tâcherons” no nampiasaina fa tsy orinasa toy ny mahazatra.... nanambara moa ny praiministra fa izay fahaizamitantana izay no zava-dehibe. Foto- pisainana hoy izy ny fitsinjarampahefana. Rehefa omena fahefana dia ampiasaina amin’ny tokony ho izy fa tsy hanaovana fanararaotana. Manana adidy hitondra fanasoavana amin’ny vahoaka ny olom-boafidy hoy hatrany izy...
Zava-dehibe ny fahitana fa efa voafehin’ny kaominina maro ny fanaovana budget primitif. Mila fandrindrana ny asa hoy izy ary tsy tokony hesorina ny olona nahazo fampiofanana Rehefa miova ny ben’ny tanàna. Ny fitsinjaram-pahefana tena izy dia miankina amin’ny tamberin’ andraikitra. Nitsidika ny fotodrafitrasa natao tao amin’ny kaominina Betsako moa izy ireo avy eo.